Madaxweyne Axmed Madoobe oo digniin Culus u jeediyay Hay’adaha ka hawlgala Deeganada Jubbaland (OGOW SABABTA) | allsaaxo online
Madaxweyne Axmed Madoobe oo digniin Culus u jeediyay Hay’adaha ka hawlgala Deeganada Jubbaland (OGOW SABABTA)
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed ( Madoobe) oo kulan gaar ah magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ah ee maamulkaasi kula qaatay Hay’adaha samafalka ee ka hawlgala degaanada Jubbaland ayaa eedeyn u jeediyay xubnaha uu la kulmay.
Wuxuu sheegay Hay’adaha qaarkood in aysan si sax ah ugu adeegin shacabka qaar ee ku nool degaanada Jubbaland ee xaaladaha adag ku jira, wuxuu tilmaamay in maamulkaasi uusan caqabad ku aheyn Hay’adaha balse ay ku dhaliilayaan qaabka ay u hawlgalaan.
“Annagu ma lihin Hay’adaha hangu soo wareejiyaan shaqadooda, annaga ha noo dhiibaan mashruuca, intaas oo dhan ma dooneyno, keliya aragti ayaan ku leenahay iyo inaan saxno wixii qalad ah ee dhaca, waxaan ka daba tageynaaa mshaariicda been abuurka ah, waxaan rabnaa inaan ku yeelano door la xisaabtan.” Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay si nidaam ah kula shaqeeyaan, wuxuuna ka dalbaday in ay dib u saxaan wixii qaladaad ah ee jira.